Drum ash nooca qabow - Shiinaha Kechengyi Ilaalinta Deegaanka iyo Electric Power Technology
nooca Dry-qalabka maaraysay slag for kuleeliyaha isuku soo Dhuxul
nooca Dry-conveyor slag
qalab extrusion slag Large
Joogu u geliyo
Mashiinka slag duudduuban - Single
fiicni usheeda dhexe Double
ash qallalan preload bulk
albaabka fur Pneumatic
Shiiloh Slag iyo qalabka kaabayaal
nooca qoyan-qalabka maaraysay slag for kuleeliyaha isuku soo Dhuxul
Dewatering Shiiloh slag
albaabka xiridda Haydarooliga
Xoqo slag conveyor
conveyor Slag for kuleeliyaha foornada gasification
qalabka kuleeliyaha saarista ash
bin Ash iyo qalabka kaabayaal
wajiga cufan nidaamka gaarsiinta ash pneumatic
Milo wajiga nidaamka gaarsiinta ash pneumatic
slide Buugga saxan qaddar
nidaamka gaarsiinta nuuradda Pneumatic
qalab u qaadidda slag kuleeliyaha sariirta buusho
Chain conveyor baaldi
Drum meeldhexaadka ah ash nooca
shekeysan Electric hawada-qufulka
Gundhig xoqo conveyor
Joogu u simbiriirixan iridda saxan
nooca-Box flusher ash
goysyada ereydaas Electric
goysyada ereydaas Manual
Ku marooji isku qasin conveyor ash
Single duudduuban wax burburinayay slag
si wadajir ah biyo Rotary
Drum Nooca Ash meeldhexaadka ah
1. Guud Hordhac
meeldhexaadka The ash nooca durbaanka waa Iskubedelka kulaylka nooca durbaanka loo isticmaalo qaboojinta wax ka badan, qaab-dhismeedka iyo nidaamka kala beddelashada kulaylka ah kuwaas oo ka mid ah in Iskubedelka kulaylka caadiga ah ka duwan. Waayo, meeldhexaadka ah nooca durbaanka ash ah, saddex hababka kala iibsiga kulaylka sida shucaaca kaamerada, tabinta, iyo convection ka shaqeeya waqti isku mid ah, iyo kuwa dhexdhexaadka ah qaboojinta hoose waa biyaha iyo sare waa hawada. Waa qalab sare ash-oolnimada qaboojinta, kaas oo loogu talagalay in looga baahan yahay ee kuleeliyaha weyn-mugga CFB ah. meeldhexaadka ah ash durbaanka wuxuu ka kooban yahay durbaanka, qalab buux ash, qalab dheecaan ash, qalab drive, qalab isugu gudbiyo, qaboojinta nidaamka biyaha iyo qalab kaantaroolka korontada, kaas oo si gaar ah loo isticmaalo qaboojinta ee ash kulul of kuleeliyaha CFB
2. Qaab-dhismeedka Main
meeldhexaadka ah ash durbaanka wuxuu ka kooban yahay durbaanka, nidaamka qoqobada, nidaamka drive, qalab ash dhacaysa, qalab dheecaan ash, qaboojinta nidaamka biyaha iyo qalab kaantaroolka korontada. Dhismaha ugu weyn iyo hawlaha waa sida soo socota:
Drum, waayo, taasu waxa ay ka kooban by durbaanka gudaha iyo durbaanka dibadda ah, oo wadajir ah saabka biyo lifaaqo wadajir Rotary iyo tuubooyinka biyaha soo laabtay. darbigiisa gudaha hoose durbaanka gudaha ayaa welded leh dhererka caarada ka aarayo-diyaarin fur iyo garbaha gaadhya, oo kulaylka slag wareejin karaan in wareegaya biyaha qaboojinta by tabinta kaamerada, convection iyo shucaaca.
durbaanka waa qayb ka mid ah shaqada ugu weyn ee meeldhexaadka ah ash durbaan, iyo taxanaha GTL durbaanka hal meeldhexaadka ah ash iyo taxanaha GTLS tube multi-durbaanka baaritaanka meeldhexaadka ah ash meeldhexaadka ah ash ee waxa loo qaybin karaa sida ay qaab-dhismeedka durbaan.
Qoqobada nidaamka: waxa ka kooban yahay taageerada kaatunkiisii, oo taageeraya wheel, iyo wheel qabsado. giraanta taageerada la geliyo ee ka baxsan durbaan, kaas oo la eryay by hab wadida in ay riixaan durbaan qoqobada on afar giraangirood oo taageeraya. height ee durbaanka la dhigay karaa in la hagaajiyo wheel taageeraya. wheel qabsado The yareyn kartaa barakaca axial ee durbaanka.
Ash qalab ka dhicin, waayo, kaasu wuxuu ka kooban yahay manhole, si wadajir ah ballaarinta, ash dhacaya biibiile, taangiga ash, qalab quwad ash. ash hoose kuleyliyaha ku dhici doonaan durbaanka ee meeldhexaadka ah ash ka dhex biibiile buux ash ah. taangiga ash waxay leedahay a negative-karka dhagixiina way dekedda. aalad quwad ash The hortagi karaa ash ka soo dusaya by tallaabo anti-wareejin ah.
qalab dheecaan Ash: waxa ka kooban yahay outlet ash dhagixiina way cover iyo ash outlet, oo lagu rakibay leh dekedda hawada negative-karka iyo dekedda dheecaan ash. cover quwad wuxuu ka kooban yahay laba qaybood saari karo (qaybo ka mid sare iyo hoose), taas oo ku haboon dayactirka.
Qaboojinta nidaamka biyaha, waayo, kaasu wuxuu ka kooban yahay qoqobada wadajir biibiile, biyo si durbaan, soo noqon tuubooyinka biyaha, tuubada biraha. Nidaamkan keeni kartaa iska kulaylka laga ash u nuugo. si wadajir ah waxay u qaybisay qoqobada biyaha tubada iyo biyo ku noqon siman dhamaadka outlet ah, taas oo ku haboon dayactirka iyo ammaan iyo sidoo kale. si wadajir ah waxay qoqobada ku qalabeysan yahay accessories ammaanka sida meter cadaadis, RTD, waalka ammaanka. accessories kuwa lagu rakibi karo on dhuumaha qaboojinta biyaha iyada oo la raacayo shuruudaha shuqullada.
qalab kaantaroolka Electric: waxaa inta badan waxaa loola jeedaa Golaha Wasiirada korontada gacanta iyo qalabka gacanta la xiriira, taas oo siin kara calaamadaha awoodda iyo gacanta in dambas qabow. Waxaa soo diri kartaa signal fog si ay u gaaraan hago.
3. Main Technical dhimaya
model ee meeldhexaadka ah ash waa GTL (S) D - n × L (bidix ama midig), ka mid ah taas oo, D taagan tahay dhexroor durbaanka (mm), oo ay ku jiraan 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, iyo 2000 mm, n u taagan tahay awooda (t / h); L u taagan tahay masaafada u dhexeysa tubada iyo outlet (mm). Sida laga soo xigtay jagooyinka rakibo oo kala duwan, meeldhexaadka ah ash ee loo kala saari karaa sida nooc ka tagay iyo nooca saxda ah, soo food outlet ash u qabow, waxaa ka tagay nooca haddii motor bidixda iyo waa nooca saxda ah haddii motor ku yaal dhinaca midig. Dhererka meeldhexaadka ah ash uusan ka go'an, taas oo inta badan la xiriira awoodda, heerkulka ash, iyo masaafada u qiimeeyo dhexeeya tubada iyo outlet. wax soo saarka ee meeldhexaadka ah ash waa 0 - 80t / h. Iyo heerkulka qaboojinta waa 80 - 150 ℃
4. Waxbarashada Rakibaadda
Dhig meeldhexaadka ah ash uu dhulka ku fidsan oo leh sita awood ka badan 6000Pa, (bool barroosinka muhiim ma aha), ka dibna ku rid bir gundhig dhulka ee afarta gees oo rukummada ah ash ilayska meeldhexaadka ah, iyo Weld birta helidda on birta gundhig in looga hortago dhaqaaqin markii meeldhexaadka ah ash la dhigay meel sax ah
Markay aasaaskii uu ka badan yahay dhulka, ku shub laba gaadhya ama afar transverse Caraabaah aasaaska strip la taaban karo xoog badan C30 on dhulka. Marka nooca bidix iyo midig meeldhexaadka ah ash nooca waxaa soo socda diyaarin in kasta oo kale, waayo, dayactirka ku haboon iyo dayactir, motor drive waa in la qabanqaabiyaa dhanka dibadda ah, taas oo macnaheedu yahay saaray meeldhexaadka ah nooca bidix ash ee dhanka bidix, iyo xaq u ku qor dhinaca midigta.
taxane GTL durbaanka hal meeldhexaadka ah ash
1) wax soo saarka badan, taas oo ay gaari karaan 80t / h ugu badnaan ah
2) meel gudaha ah Large, taas oo ku haboon si loo baaro iyo fududahay dayactirka qiimaha hooseeyo.
Next: slag Pneumatic waalka dheecaan
waalka iridda heerkulka sare Manual
silsilad Drive marsho
qalabka quudinta Slag
caabin heerkulka sare compensator jiingado
No.62, wadada Xinjiang, magaalada todabaadkii, magaalada Qingdao, gobolka Shandong, Shiinaha
Maareeyaha Sales: Qingdao Liu
Isticmaalka walxaha qarxa for Deslagging kuleeliyaha